Iiresiphi ezi-6 ezinempilo xa uziva ngathi ufuna ukutya iilekese Discover️ Discover Online ▷ ➡️
Kunzima kakhulu ukuhlala kude nonyango olumnandi, kwaye ii-dieters zihlala zifuna ukuluma ubuncinci kwinto enye yedessert emnandi.
Nangona kunjalo, awunyanzelekanga ukuba uzisuse ezi zinto zimnandi kwimenyu yakho ukuba uzama ukunciphisa umzimba. Unokuziqhelanisa nezinto ezimbalwa kwaye wenze ii-smart swaps zokwenza ukuphatha okunempilo, ukukhanya, kunye nencasa ngokulinganayo.
Jonga iindlela zokupheka ezintandathu:
1 I-avocado mousse kunye necocoa
2 Iilekese zobisi basekhaya
3 I-Banana ice cream kunye ne-chia protein
4 Ikhokhonathi yeCarb ephantsi yeCream
5 Ubisi oluncitshisiweyo olwenziwe ekhaya
I-avocado mousse kunye necocoa
½ iavokhado ephakathi
Iipunipo ezi-2 zecocoa powder
1 icephe (itafile) lobusi
2 iisupuni zecocoa nibs
Hlanganisa i-cocoa powder, i-avocado kunye nobusi kwisitya. Ukubetha kude kube lula. Beka efrijini, ufefe i-nibs kwaye ukhonze i-ice cream.
Isivuno: ii-servings ezi-2
Iilekese zobisi basekhaya
Iresiphi yokubulala umnqweno wokutya iilekese ngokulula
Awungekhe ulwe nomnqweno wokutya iilekese. Ayinakuphepheka, kwaye kungekudala okanye kamva, iyavela. Iindaba ezimnandi zezokuba awunyanzelekanga ukuba uqhubeke ukuzibetha ngenxa yoko. Iilekese, kanye ngexeshana, zenza okuninzi okuhle kwimpilo yakho yengqondo. Ukukunceda ukuba ubulale iminqweno yakho ngendlela esempilweni, siza kukufundisa le recipe emnandi yenye yeelekese ezithandwa kakhulu:
Ubisi lweamangile ezingama-700ml
Ubisi lwekhokhonathi engama-75ml
Iipuniwe ezi-4 zeswekile yekhokhonathi
1 icephe leswiti yendalo (i-stevia, i-xylitol, njl.
Hlanganisa zonke izithako kunye nobushushu malunga nemizuzu engama-45- ungalibali ukuqhubeka ushukumisa. Ngokukhawuleza nje ukuba ifikelele kolo bisi lwejam yobunjani kwaye ijongeke, ilungele ukutya!
I-Banana ice cream kunye ne-chia protein
Funda indlela yokwenza iprotein ice cream esempilweni ngeentsuku ezishushu
Iibhanana ezi-6 eziphakathi zixutywe zacocwa ukuba ziingumkhenkce
1 icephe ecocekileyo eluhlaza webhanana eluhlaza
3 iisupuni zechia
1 ithisipuni yevanilla
1 itispuni yentsini
1 itispuni xanthan gum
1 isipuni seswekile yekhokhonathi (ukhetho)
1 ithisipuni yomhlaba isinamon (ukhetho)
Emva kokuba ibhanana inyibilikisiwe, yixube kwi-blender kunye ne-biomass, chia, kunye ne-vanilla. Okwangoku, nyibilikisa iintsini emanzini ngokwahlukeneyo. Emva kokuba ibhanana, i-biomass, i-chia kunye ne-vanilla zibethwe kakuhle, yongeza iswekile. Yongeza isinamon yokugqibela. Ngoku yise kwisikhenkcezisi kwaye usiyeke sibe lukhuni oku kuthatha umndilili weeyure ezi-4. Khetha usuku olushushu kakhulu kwaye wonwabe.
Ikhokhonathi yeCarb ephantsi yeCream
Ngokukhawuleza ukwenza kwaye ulungele ukutya ngaphandle kobunzima kwisazela sakho. I-Carb Coke esezantsi eyenziwe ekhaya yeyona ndlela ifanelekileyo yokutya.
I-50g yekhokhonathi eyomileyo
Ubisi lwekhokhonathi okanye ubisi olwenziweyo olwenziwe ekhaya
Ukuphelisa i-oveni ukuya kwi-200ºC. Hlanganisa zonke izithako kunye, emva koko "ibhola" umxube kwaye ubhake malunga nemizuzu eli-10. Ngoku galela ubisi lwekhokhonathi okanye ubisi oluhlengahlengisiweyo oluhlengahlengisiweyo kwiicoconuts kunye nencasa. Yenza malunga neecoconut ezili-12.
Ubisi oluncitshisiweyo olwenziwe ekhaya
Olona khetho lusempilweni lokubulala ukuthanda kuya kubambeka
1 indebe yobisi olucekethekileyo
¾ indebe yamanzi abilayo
1 icephe ibhotolo
½ indebe yokupheka iswiti
Ukubetha zonke izithako kwi-blender kude kube lula. Beka ingqayi yeglasi kunye nefriji kude kube ngokuhambelana ngakumbi. Gcina ifriji kwaye uyisebenzise ngaphakathi kweeyure ezingama-72.
Ukuvelisa: malunga neepunipuni ezingama-20.